I-Anandamide VS CBD: Yeyiphi eyona ilunge ngakumbi kwimpilo yakho? Yonke into ekufuneka uyazi malunga nabo!
Yintoni iAnandamide (AEA) iAnandamide (AEA), ekwabizwa ngokuba yimolekyuli yolonwabo, okanye i-N-arachidonoylethanolamine (AEA), yi-fatty acid neurotransmitter. Igama elithi Anadamida (AEA) lithathwe kwiSanskrit Yovuyo "Ananda." URafael Mechoulam waqulunqa eli xesha. Njani, kunye nabancedisi bakhe bobabini, WA Devane kunye noLumír Hanuš, bafumanisa okokuqala "iAnandamide" kwi1992. I-Anandamide (AEA) ilungisa kakhulu i-o ...
Agasti 22, 2020
Ukuba ujonge isongezelelo semifuno iNicotinamide Riboside Chloride, sicebisa ukuba iCofttek Nicotinamide Riboside yongeze. Inkampani yokuvelisa ijongana kuphela nezongezelelo zeNicotinamide Riboside kwaye ke, umntu unokuqiniseka ukuba izongezo ezenziwe yinkampani zikumgangatho ophezulu kakhulu. Isongezelelo seCofttek Nicotinamide Riboside siza ngee-capsule ekulula ukuzisebenzisa, ekulula ukuba ...
Ukuba ufuna isongezo esifanelekileyo seMagnesium L-Threonate, sicebisa ukuba uthenge iMagnesium Threonate powder evela eCofttek. Inkampani ibanga ukuba iyonyusa ukungafumaneki kwe-magnesium emzimbeni. Inkampani ikwatsho ukuba umgubo obonelelwe yinkampani ngenkxaso yememori kunye nokwenza ngcono umsebenzi wokuqonda. Banceda abasebenzisi ukuba balale ngcono. ICofttek yiAnandamide (AEA) ababoneleli ...
UHAMBO LOKUHLOLA I-EGT
I-Oleoylethanolamide (i-OEA) -Ingqumbo Yomlingo Yobomi Bakho